Amplifinity: Mhinduro dzeBrand Advocacy | Martech Zone
China, January 23, 2014 China, January 23, 2014 Douglas Karr
Amplifinity inogonesa B2B, B2C uye maAgency kuendesa maratidziro ekukurudzira mhando. Zvakanakira zvirongwa zvekushambadzira zvemhando zvinoguma nekuvandudzwa kwekutenga vatengi, kugadzirwa kwevanotsigira uye vanokwanisa kuwana vatsigiri, uye pakupedzisira - kutyaira kutengesa.
Nzvimbo yavo yemabhizimusi inodzikira munzvimbo dzinotevera dzekutarisa
Mutengi Anobata - AMP inosangana pamwe neyedu yese yevatengi 'touchpoints akananga kune avo emabhizimusi masystem - kuburikidza kamwe chete kusaina-kuburikidza nevatengi maakaundi, ane simba majeti, kana akareruka maratidziro.
Advocacy Zvirongwa - AMP inoita kuti zvive nyore kukumbira vatengi vako kuti vaparidze izwi panzvimbo yako. Uchishandisa peji reAccount Yangu kuteedzera zvavanoita, kufambira mberi, uye nemubairo chinzvimbo, vatsigiri vezviratidzo vanoramba vakabatikana uye vanoziva kuti vakakosha mukubudirira kwekambani yako.
Kudzora Kamuri - iyo AMP Kudzora Kamuri inobvumira mabhurandi kuvaka, kuteedzera uye kugadzirisa Mapurogiramu eAdvocacy. Kugadziriswa kwavo uye kugona kwavo kugadzirisa kunopa vatengi kugona kushandisa, kugadzirisa uye kudzora chirongwa chavo. Ivo vanogona kumisikidza uye kudzora marongero epage, kufambiswa kwebasa, uye mubairo kuronga.
Enterprise Kubatanidzwa - Yakagadzirirwa bhizinesi system kusangana, zviitiko zvinogadzirwa kuburikidza neplatifomu yavo, kubva kuendesa kune yakavharwa kutengesa, inogona kusanganiswa yakanangana neako CRM system.
Tags: kukurabrand brand kukurudzira
Jan 23, 2014 na3:28 PM